Maitiro ekugadzira Statistics Archive ne Nowgoal Data Grabber
Unoda kuziva kugadzira pakarepo chinangwa chekuverenga zvinyorwa kubhejera kwako kwepamhepo.
Iyi nyowani mitambo yekubhejera software inonzi Nowgoal Data Grabber uye muchidimbu iri data miner, mupfungwa yekuti inosangana yakanangana neanozivikanwa saiti saiti Nowgoal.com uye otomatiki anotora akateedzana e data kubva pamapeji ewebsite ino, senge huwandu hwezvibodzwa zvakahwina uye mhedzisiro yekupedzisira yemutambo.
Mukuita, kugona kutora data kubva pamusoro pemakore gumi apfuura, nekuda kwa Nowgoal Data Grabber zvichave zvinogoneka kugadzira hofori nhamba yezvinyorwa, inobatsira kwazvo kune vese avo vanoongorora parameter inoenderana nezvinangwa zvezvikwata panguva yemutambo uye avo vari pachena kubheja zvichibva pane idzi data
Maitiro ekugadzira chinangwa manhamba ekuchengetedza: ekuunganidzwa kwemashoko
Usati watanga kuvaka yako vavariro manhamba ekuchengetedza, ngatitangei nekuona kuti ndeipi data iwe yauchazokwanisa kuburitsa otomatiki nekungobaya baya nekuda kweiyi software nyowani ThatsLuck:
iyo mukwikwidzi yekureva;
zita rechikwata chekumba;
zita reboka rinoshanya;
huwandu hwezvibodzwa zvakapihwa nechikwata chekumba;
huwandu hwezvinangwa zvakawiswa nevaenzi;
huwandu hwakazara hwezvinangwa zvakawanikwa mumutambo;
mhedzisiro yekupedzisira maererano nehuwandu hwenhamba yezvinangwa;
mhedzisiro yekupedzisira maererano nechiratidzo che1-X-2.
Maitiro ekugadzira iyo chinangwa manhamba ekuchengetedza: iyo software
Ini ndinotanga pakarepo nerondedzero yechirongwa: chinhu chekutanga kumusoro kweConnection Tambo hachifanirwe kuchinjwa zvachose, nekuti ndiyo tambo yekubatanidza kune iyo Nowgoal.com saiti.
Le nhamba dzezvinangwa ivo vakawedzeredzwa kubva pamapeji ane chekuita nebhuku rinozivikanwa rinozivikanwa Bet365; kune avo vanoshuvira kuyedza, nekusiyanisa chikamu chechinyorwa panonyorwa zita ra bookmaki, zvinofanirwa zvakare kuverengera data kubva kune vamwe vabati.
Pakarepo pazasi unowana minda Sarudza Zuva reNguva mauri iwe unonyatsopinda mazuva (mazuva) auri kufarira kuburitsa, semuenzaniso kana iwe uchida kubvisa meseji yegore 2019, uchafanirwa kupinda 01/01/2019 mundima yekutanga uye 31 / 12/2019 mune yechipiri.
Wobva wadzvanya pane bhatani kurudyi kwemazuva (Data Grabber).
Mira, haufanire kuita chero chimwe chinhu, nekuti Nowgoal Data Grabber ichabatana zvakananga kune iyo Nowgoal saiti (kuruboshwe rwechidzitiro iwe uchaona iyo peji resaiti iyo ichavhurwa) uye zuva nezuva ichaburitsa data rese rinokufadza iwe!
Kana iyo nzira yekubvisa yapera, unogona kusevha yako dura, kurodha yakambochengetwa dura, kana kudzima rese rakatorwa dhata.
Semuenzaniso, kana iwe watanga kuburitsa iyo data yegore rimwe chete (ini ndinokurudzira kuti utore mwedzi mumwe panguva), unogona kurodha kana kuchengetedza iyo dura, kuenderera iyo yakambokanganiswa kuchera dhata; saka zvinokwanisika kuita chikamu chakaburitswa chemazuva, vhiki, mwedzi, nezvimwe.
Nemakiyi ekuruboshwe / kurudyi museve iwe unogona zvakare kupurinda zvinyorwa kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira, wozvimisikidza nekuwedzera zuva (Order neDheti) uye, uine bhatani kurudyi, iwe unogona kuvhura iyo folda panochengeterwa matura ese (mune db Fomati fomati).
Nowgoal Data Grabber: vs.Archive kutendeuka muExcel
Kurudyi kurudyi iwe unowana yakakosha kiyi, iyo inobvumidza iwe kuchengetedza iyovavariro manhamba ekuchengetedza yakatorwa muExcel fomati inoenderana.
Kana izvi zvangoitwa, iwe unogona kuvhurazve iyo faira muExcel uye nekushandisa ese aripo mafirita, unogona kuongorora zvakadzama huwandu hwezvinangwa zvechikwata kuti zvirinani kumisikidza kubheja kwako kwepamhepo.
File Download	NGDGrabber.zip - 54 MB
Download 4964 Downloads